Umhla My Pet » Dating and Relationship Advice – Law of Attraction
ukubuyekezwa: Aug. 13 2020 | 3 min ukufunda
Ngoko ke yintoni na Law of Attraction? Ngamafutshane ke uMthetho Universal ukuba uthi siza kutsala kungena ebomini bethu izinto sinikele ingqalelo zethu, nokuba unayo okanye awunayo. Enoba uyayazi loo nto okanye hayi, lonke babecinga ukuba, esivakalelwa uziva, yonke uve uze ufunde, kuchaphazela akho afezeke.
Ngoko ke yintoni na enam nokuthandana kunye nobudlelwane?
Xa ukuqonda ngokwenene into ofuna lulwalamano nokusebenzisa uMthetho esisiseko kakhulu eminye imigaqo Attraction, uya kuqinisekisa ukuba ufumana ntoni ufuna ngokwenene. Kubalulekile ukuqonda ukuba yintoni kanye iimpawu ezibonakalayo, ezisingela, amaxabiso, iinkolelo, umdla ebalulekileyo kuwe ukuze ingqalelo into ofuna kulwalamano lwakho endaweni oko awufuni.
khumbula, uya kufumana into ingqalelo.
Mamaxesha amaninzi, abantu baya kuhambela kwelinye nolwalamano wasilela kwelinye ungakhange kwaukucinga nenjani kutheni okanye ubudlelwane babo ukugcina nokuphela. Kanangcono, bona kwabangama echanekileyo ziphelela kwenye ubudlelwane lome ezifanayo, izizathu noko malunga ezigabadeleyo.
“Ukuba ufana nam, akunalo nofifi nto ufuna ngenene
kulwalamano lwakho olulandelayo N kufuneka yahluke ngokupheleleyo
lowo wokugqibela basilela ngokulusizi!”
ngokuqinisekileyo ndandisazi into ndandingafuni n ubuncinane bubudlelwane ukuba ukuphela. Ngaba bekungayi kuba kakhulu ukuba kwakuya kufuna ixesha lokucinga zonke ubudlelwane ayiphumelelanga ezidityanisiweyo yonke into ebuhlungu zibe ingcamango gca into endiyenzileyo yaye akazange afune kubudlelwane? Mna ndasindisa owam ezikhawuleziyo ezimbalwa Ujingi.
Njani 'Ukutsalela’ ulwalamano ogqibeleleyo kum?
Ndiza kukubonisa indlela ngokwenene ekhawulezayo nelula Ukutsalela umntu ngqo ukuba ufuna – Umhla Iphupha lakho!
Thatha iphepha aze abhale phantsi yonke into ofuna kulwalamano lwakho egqibeleleyo. Yintoni na okanye ufuna? Njani zikhangeleka, ivumba, thetha? Zeziphi iintlobo zinto uya kuyenza kunye? Uvakalelwa njani xa wena nabo? Ngokwenene singene oku kwaye bathatha ixesha babhale phantsi zonke iinkcukacha. Iyakuba ziwufanele kakuhle kuyo ekupheleni.
Abantu abaninzi abazange eli nyathelo ukubhala phantsi oko bafuna ukanti na elinye inyathelo ubalulekileyo ekufumaneni iqabane yamaphupha abo.
“Ngaba uyazi ukuba ufuna ntoni ngokubhala phantsi nje, wena ukwandisa amathuba akho okufumana kuyo 80%!”
ndicinga nje ukuba umzuzu…
Musa anathandabuza ngokwakho. Sicinga ukuba zigqibelele zonke yaye akukho nto imi ngendlela akho okufumana kakuhle into ofuna. hayi imali, okanye onijongele, okanye ixesha, okanye nantoni na.
“ImagineÖ Uyakwazi ukuba nantoni na ofuna!”
Xa ugqibileyo oku, uya kuba kakuhle phambi komdlalo. Thatha ixesha elide kangangoko ufuna… Oku sisitshixo kwimpumelelo sakho sokugqibela!
Icace kakhulu engqondweni yakho malunga nokuba ufuna. kungenjalo, Indalo uya kuba abayazi into Ufuna ngokwenene n yaye loo nto iya kukunika into. (Nje inqaku ngokukhawuleza, xa ndithi 'Universe', Ndithetha uThixo, Buddha, Mother Earth, okanye nantoni elide usebenzisa kuba amandla akho jikelele ephakamileyo.)
Confused? Hlala nam hereÖ Khawube ukuya yokutyela odola hamburger. Le weyitala amathuba ukuze yakho. Phambi hamburger wakho ufika, ukuba utshintshe umyalelo wakho. Kaloku ke ùthi le weyitala ukuba ufuna ngokwenene iqatha lenyama. Le weyitala amathuba ukuze yakho. Phambi ezenzekelayo wakho ufika, umxelela le weyitala ukuba utshintshe ingqondo yakho kwakhona kwaye ungathanda isaladi. Ke kaloku ngeli thuba, inkoliso kubalungiseleli uza kukuxelela ukuba wenze isaladi ngokwakho. The Universe akayi kwenza oku, kodwa ngaba ubona kunzima kakhulu njani Indalo ukukunika ufuna kanye xa endingamaziyo?
n ILUNGILE akugqiba?
Ukuba akazange enze nto n ukubuyela uze uyenze. Ndathi ukuba oku kuya kuba lula, kodwa kusafuneka ndenze okuncinane yomsebenzi.
Ke kaloku, ukuba sele icace kakhulu ngento ngokwenene abafuna neqabane, ukuthatha loo iphepha, ulisonge phezulu kwaye sithwalwe nani ubuncinane ngeveki. Bathwale epokothweni yakho, kwiwalethi okanye esipajini sakho, okanye kwimpahla yakho. Akukhathaliseki apho uyibeke, ixesha elide kangangoko usigcina nani ubuncinane ngeveki. Lonke ixesha khumbula ukuba olu iqhekeza ephepheni kunye nawe, khumbula imvakalelo uya ungathanda ukuba yintoni na ukuba neqabane lakho. Ngokwenene uyive!
Kukho elinye inyathelo kubaluleke kakhulu. Ngexesha le veki, qinisekisa ukuba uphulaphule emathunjini yakho, okanye ilizwi elingaphakathi. Ukuba ikuxelela ukuba kunqumama abacoci owomileyo ngoLwesibini xa badla ngoLwesine, kuhamba ngoLwesibini! Usenokuba kukukhawulela ubambo lo gama lakho emi ngokuhambelana. Ingongoma apha ukuba Ndibeke umyalelo wakho kunye liphela, ngoku kufuneka unikele ingqalelo imiqondiso sithunyiwe indlela yakho UMTHETHO kubo!